काठमाण्डौ । नेपालमा पछिल्लो समय हरेक रियालिटी सो वि’वादमा आउने गरेका छन् । त्यस्तै, चर्चित साङ्गीतिक रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ पनि बारम्बार विवादमा फस्दै आएको छ । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिनज १ का विजेता सिडी विजय अधिकारीले आफूले जितेको पुरस्कार नपाएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । यसैबिच उक्त सिजनका फाइन लिस्ट कुशल आचार्यले पनि कन्ट्रयाक्ट पेपर अनुसारका कुरा नभएको भन्दै भ्वाइसलाई खुल्ला पत्र लेखेका छन् । उनले उक्त पत्रमा झुटा सपना देखाएर गीत सङ्गीतलाई व्यवसाय बनाएको आ’रोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्,
” खुल्ला पत्र ….
….भाेईस अफ नेपाल ………. म भाेईस अफ नेपाल सिजन ~१ काे टप ४ फाईनलिस्ट मध्य एक सृजय थपलिया। मलाई यसरी सामाजिक सँजालमा अाएर अाफ्नै टिम भित्रकाे कुरा गर्न त मन थिएन ।तर मलाई समबन्धित ले नै बाध्य बनाएकाे हाे। एक बर्ष लामाे समय सम्म म माैन बसेकाे नै हुँ। अाज अाज भाेली भाेली भन्दै कनट्रयाक्ट पेपरमा सहमति भएका कुराहरु सिजन दुई सकिदा पनि हामिलाई भनिएका कुराहरु पुरा नहुँदा याे प्रतिभा उजागरकाे नाममा मा‌‌ैलाएकाे ठगी धन्दा बुझेकाे छु।
बिश्व भ्रमण,एक बर्ष सम्मकाे खाने बस्ने ब्यवस्था , मासिक एक लाख तलव , हरेक साे गरे बापत ५०% रकम जस्ता थुप्रै भ्रामक सपनाहरु देखाईए जुन कागतमा मात्र सिमित रहे। हामीले बारम्बार अनुराेध गर्दापनि हामीलाई बेवास्ता गरियाे। कनट्रयाक्टमा रहदाँ अाफु अनुकुल कामपनि हामीलाई गर्न दिईएन। कसैलाई झुठाे सपना देखाई गीत सँगीतलाई ब्यवसाय बनाउँनु राम्राे हाेईन। अहिले सिजन २ का नयाँ कलाकार अाई सक्दापनि सिजन १ कै हिसाब किताब मिलेकाे छैन । याे निकै लज्जास्पद , हाँस्यास्पद र गैर जिम्मेवारी कुरा हाे। भन्न त धेरैले भन्नु हाेला भाेईस अफ नेपालले नै चिनायाे र अाज त्यसकै कुरा काट्दैछ। तर धैर्यताकाे पनि एउटा सिमारेखा हुँदाे रहेछ र अाज यसरी लेख्न बाध्य भएकाे हुँ ।
जस्ताे नव प्रतिभाकाे ठाउँमा उभिएरपनि साेचिदिनु हाेला अनि हामी माथी भएकाे अन्याय महसुस गर्नु हुनेछ। धेरैले भन्नु हाेला सृजयले याे के नाटक गर्याे एक बर्ष अघि नै किन यसरी कुरा ननिकालेकाे भनेर। हामी नेपालमा सबैले भावना र समबन्धलाई कदर गर्दै काम गरेकाे हुन्छाैँ। त्यसैले धेरै माैका दिए मैलेपनि समबन्धित माहानुभावहरु लाई । घुस लिने जतिकै दिनेपनि उतिकै सजाएकाे भागीदार भए जस्तै अन्याय गर्ने भन्दापनि अन्याय सहनेकाे ठुलाे गल्ती हुन्छ। याे कुरा मैले मन देखि नै बुझेकाे छु र याे शैलीकाे अनत्य पनि हुनुपर्छ भन्ने मेराे मान्यता हाे। याे खुला पत्रलाई अनत्य नसाेचिदिनु हाेला याे त मात्र सुरुवात हाे। सृजय थपलिया ~ फाईनलिस्ट सिजन -१”
खुल्ला पत्र ……..भाेईस अफ नेपाल ……….म भाेईस अफ नेपाल सिजन ~१ काे टप ४ फाईनलिस्ट मध्य एक सृजय थपलिया। मलाई…
Geplaatst door Shrijay Thapaliya op Maandag 16 maart 2020